Fifidianana any Frantsa ny 24 aprily 2022 – JucelinoLuz
Águas de Lindoia, 16 aprily 2022
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena miseho eto Frantsa, dia manazava aho fa tsy misy fiantraikany amin’ny zava-bitako amin’ny maha-mpanolotsaina ara-panahy na paranormal ahy ny zava-misy ankehitriny amin’ny fifandimbiasan’ny filoham-pirenena, araka ny iantsoan’izy ireo ahy matetika, satria ny fikarohana siantifika mifototra amin’ny Parapsychology. Asehoy fa ny taham-pahombiazana eo amin’ny 7% (fito isan-jato) dia ampy hahazoana mari-pahaizana ambony momba ny paranormality, ary inona no holazaina rehefa mahatratra 70% (sivifolo isan-jato) amin’ny faminaniany ny oracle, raha ny amiko! Mifidy izay mety aminy foana ny vahoaka, izay mampiseho ny fahafahana be indrindra amin’ny fanovana, na izany aza, saika tsy hitranga mihitsy izany – satria izy rehetra (mpanao politika, tsy manao ankapobeny) dia anisan’ny lalao mahaliana iray ihany.
Eto isika dia manana an’i Emmanuel Macron, mpanao politika frantsay, mpiasam-panjakana ary banky, mpikambana ao amin’ny Antoko Sosialista lam nanomboka tamin’ny 2006 ka hatramin’ny 2009. Amin’ny ankapobeny, hita ho centrist i Macron. Misy miantso azy ho liberaly ara-tsosialy, ny hafa kosa milaza azy ho demokraty sosialy. Nandritra ny fotoanany tao amin’ny Antoko Sosialista Frantsay, dia anisan’ny elatra afovoan’ny hetsika izy, izay nofaritana ho “lalana fahatelo” ny politikany, izay fomba fijery matetika mifandray amin’ny mpanao politika toa an’i Bill Clinton, Tony Blair ary Gerhard Schröder. Izany hoe “avy amin’ny ankavia”
(Nilaza izy talohan’ny fifidianana fa tsy an’ny Firenena ny tsy vita vaksiny – izany hoe tsy frantsay izy ireo, dia niova ny toe-tsainy tamin’ny ady hevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena, hoy izy tamin’ny fomba feno fitiavana!? – niova hafahafa izy ary haingana!)
Amin’ny lafiny iray, manana Marion Anne Perrine Le Pen, fantatra kokoa amin’ny anarana hoe Marine Le Pen, dia mpisolovava sy mpanao politika avy any Frantsa. Mpikambana ao amin’ny Parlemanta Eoropeana nanomboka tamin’ny 2004 ka hatramin’ny 2017, voafidy ho filohan’ny National Front izy tamin’ny 16 Janoary 2011, nisolo ny rainy Jean-Marie Le Pen. Izy koa dia mpanolotsainam-paritra ho an’ny faritra administratif Nord-Pas-de-Calais nanomboka tamin’ny martsa 2010 ary mpanolotsaina monisipaly ho an’ny kaominina Hénin-Beaumont nanomboka tamin’ny martsa 2008. Izany hoe “elatra havanana”
“ Matahotra fiovana noho ny antony tsotra ny olona; ny fiovana dia tsy fantatra, izany hoe zavatra tsy fantatra. Azo antoka fa satria zavatra mety hitranga izany, dia mbola tsy niaina ny zavatra ho avy ilay olona, ​​ka ny fisalasalana, ny tsy fandriampahalemana ary ny tahotra dia fahatsapana matetika rehefa miresaka momba ny fiovana. Ny fanovana dia voaforona amin’ny hits sy diso. “
Tsy mifangaro na havia na havanana ny faminaniana! Ary tsy mandeha toy ny lalao baolina kitra akory….
“Ny anjaran’i Frantsa dia eo am-pelatanan’ny vatonao.”
Mazava ho azy fa tsy misy amin’izy ireo no ho vahaolana amin’ny lalan’ny fahazavana sy ny fivoaran’i Frantsa, na izany aza, ny iray amin’izy ireo dia mila mandray ny toerana.
Ara-dalàna ny toetry ny andrasana vokatry ny fifandimbiasana
Ny fifidianana filoham-pirenena dia miseho ho fotoana lehibe
fiampangana sy polarizations, fa tiako ny manazava fa tsy mamelabelatra aho a
fandikana ara-tsaina fotsiny ireo fanambarana azoko, fa
Miasa toy ny fantsona aho, fitaovam-pifandraisana hifandraisana amin’ny vahoaka amin’ny ankapobeny momba ny faminaniako (faminaniana).
Misy ny mety azo ovaina
tari-dalana, amin’ny zava-misy tanjona, ary ity mety, ity
materialization ny zava-misy, in germ, no hitako fa misy
tranga azo ovaina (rehefa misokatra ny tsingerina sy ny sisa
mamela azy), amin’ny alalan’ny fihetsik’olombelona na ny fanalana azy, amin’ny alalan’ny fitenin’ny hery
, izay tsy mihetsika fotsiny amin’ny zava-misy, fa koa
ao ambadiky ny tantara, eo amin’ny lafiny rehetra amin’ny fiainan’ny olombelona, ​​tsy eo amin’ny sehatra politika ihany.
Tiako ny mitanisa ny sonnet ny aingam-panahin’ny poeta ny mpiambina taloha, , izay miresaka momba ny fanodinkodinana ny Tantara,
mitondra ny lohateny hoe “Tantara na lalao echec”, izay mamintina tsara ny fotoana ara-tantara iainantsika, izay iarahan’ireo hery masiaka hanodikodina ny tantara, mamolavola azy araka ny tombontsoany, izay matetika tsy mifanojo amin’ny faniriana sy ny faniriany. filàn’ny vahoaka: Fanavaozana ara-politika, fanavaozana ao amin’ny Rariny no ilain’i Frantsa, satria nandritra ny 53 taona niainako natokana ho amin’ny lafiny ara-panahy, dia tsy nisy afa-tsy manam-pahefana sy politika nanararaotra ny olona tsara fanahy aho, tsy tany Frantsa ihany, fa nanerana ny tany rehetra. planeta – tsy amin’ny ankapobeny – amin’ny alalan’ny fampanantenana, kolikoly, fitaka, ary indrindra indrindra, ny sasany mampiasa ny fahazavan’ny lalàna, amin’ny fampiharana ny tsy rariny. Noho izany dia tsy mifanandrify amin’izay mety ho fanambarana sy fiampangana mety hiseho ato ho ato (marina na tsy mety), ary tsy manana na inona na inona manokana hanoherana azy ireo aho (tsy anisan’ny antoko politika aho, fanajana ny rehetra) , na inona na inona, lazaiko fotsiny dia eo amin’ny toeran’ny mpitari-dalana ara-panahy ho an’ny olom-pirenena izay mitady lalan’ny fahazavana aho, na angamba, fampiononana sy fitarihana eo amin’ny fiainany ho amin’ny hoavy tsara kokoa – iza no mahalala, kompà, afaka mitondra faravodilanitra vaovao izy ireo- satria tsy manana toerana ara-politika aho, raha ny marina, ireo izay miaina amin’ny fanararaotana ny hafa, dia tsy mahita lalan’ny fahazavana, hiaina mandrakizay ao amin’ny ego, amin’ny fikatsahana fahefana, ao amin’ny fanirery, ho faty ao anaty a faribolana masiaka, matetika, tsy misy fiverenana.
Prof. Jucelino Luz – mpahita, mpanoratra, mpiaro ny tontolo iainana, mpanolotsaina ara-panahy
Raha te hianatra bebe kokoa sy hanohizana ny famakiana, tsindrio ny iray amin’ireo rohy eto ambany: